Showing १-१० of २,०८५ items.
इञ्जिनियरिङलाई वाइओडी क्रिकेटको उपाधि
धरान । ‘अन्डर २१ प्रथम वाइओडी च्यारिटी क्रिकेट टुर्नामेन्ट’ को उपाधि पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङ क्याम्पसको टिमले जितेको छ । धरान–१५ खोरिया बस्तीस्थित रङ्गशालामा शनिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा पूर्वाञ्चलले आयोजक युथ अन डेस्टिनी (वाइओडी) लाई ४ विकेटले पराजित गरेको हो । टस जितेर मैदानमा उत्रिएको आयोजकले कुल १२ ओभरमा १ सय ३ रन बनाएको थियो भने जवाफी मैदानमा उत्रिएको पूर्वाञ्चलले ४ विकेट रहँदै १ सय ४ को लक्ष्य भेट्टाएको हो । विजेता पूर्वाञ्चलले नगद १५ हजार र उपविजेता बनेको आयोजकले नगद १० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण–पत्र पाएको छ । प्रतियोगितामा आयोजकबाट कप्तान रोशन साह मेन अफ दी सिरिज घोषित हुँदै
वाई वाई उन्नाइस वर्षमुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जीत दर्ता गरेको छ । आज सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिमले कर्णाली प्रदेशलाई १० विकेटले हराउँदै पहिलो जीत दर्ता गरेको हो । कर्णालीले दिएको ६७ रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले बिना विकेटको क्षतिमा १२.१ ओभरमा पुरा गर्यो । सुदूरपश्चिमका कप्तान खडकबहादुर बोहरा ४२ बलमा पाँच चौका र दुई छक्कासहित ४१ रनमा अविजित रहे । नरेश भट्ट ३१ बलमा ३ चौकासहित १६ रनमा अविजित रहे ।त्यसअघि, मूलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको कर्णाली १६।५ ओभरमा ६६ रनमा अल आउट भएको थियो । कर्णालीका प्रकाश जैसीले सर्वाधिक १५ रन बनाए । रुपक ढकाल ११ र
पथरी । मोरङको कानेपोखरी—५, स्थित जहदाको रङ्गशालामा भएको ‘जहदा भेट्रानस गोल्ड कप’ प्रतियोगिताको फाइनल खेलको उपाधि आयोजक जहदाले चुमेको छ ।उपाधिको लागि आइतबार भएको खेलमा हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसीलाई शून्यको विरुद्ध १ गोल गर्दै आयोजक जहदाले उपाधि चुमेको हो । कडा प्रतिस्पर्धा विच खेलको ३८ औँ मिनेटमा आयोजक जहदाले प्लानाल्टी सुटबाट डेनिम राईले १ गोल गरेका थिए । हाम्रो इटहरीका जर्सी नंं १५ का नेत्र कुमार श्रेष्ठले डिएरीया भित्र जहदाका जर्सी नं। १४ का श्याम कुमार गोलेलाई लडाएपछि जहदाले प्लानाल्टी सुट गर्ने अवसर मिलेको थियो । खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो ।दोस्रो हाफमा दुवै टिम आक्रामक द
पथरी । मोरङको कानेपोखरी—५ स्थित जहदाको रंगशालामा भएको ‘जहदा भेट्रानस गोल्डकप’ प्रतियोगिताको फाइनल खेलको उपाधि आयोजक जहदाले चुमेको छ ।उपाधिको लागि आइतबार भएको खेलमा हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसीलाई शुन्यको विरुद्ध १ गोल गर्दै आयोजक जहदाले उपाधि चुमेको हो । कडा प्रतिस्पर्धाबीच खेलको ३८ औं मिनेटमा आयोजक जहदाले प्लान्टी सुटबाट डेनिम राईले १ गोल गरेका थिए । हाम्रो इटहरीका जर्सी नंं १५ का नेत्र कुमार श्रेष्ठले डिएरीया भित्र जहदाका जर्सी नं. १४ का श्याम कुमार गोलेलाई लडाएपछि जहदाले प्लान्टी सुट गर्ने अबसर मिलेको थियो । खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियोे ।दोस्रो हाफमा दुवै टिम आक्रमक देखीए पनि
विजयपुर । भारतीय पेन्सन कार्यालय धरानकाे आयोजनामा भएको अन्तर भूपू समिति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा डबलतर्फ भूपू समिति धरानको समूह च्याम्पियन बनेको छ ।प्रतियोगितामा भारतीय पेन्सन भूपू समिति दमकको समूह उपविजेता बनेको छ । सम्पूर्ण खेलमा विजेता र उपविजेतालाई कप, मेडल प्रदान गरिएको थियो । बुधबारदेखि २ दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा विभिन्न उमेर समूहका प्रतियोगीहरू सहभागी थिए । ५० वर्ष मुनिको प्रतियोगितामा भारतीय पेन्सन भूपू समिति धरानका राजकुमार राई र नगेन्द्र राई विजेता भए भने भूपू समिति दमकका विष्णु तामाङ र अविनाश राई उपविजेता भए । ५० वर्ष मुनिको प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्लाका
विजयपुर । नेपालको फुटबल क्लब हिमालयन शेर्पालाई नेपाल आइसले साथ दिएको छ । मङ्सिर ३ गतेदेखि दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुने सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा सहभागी बनेको क्लबलाई नेपाल आइसले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । नेपाल आइस १ वर्षका लागि क्लबको मुख्य प्रायोजक बनेको हो । हिमालयन शेर्पा क्लबका कार्यवाहक अध्यक्ष गोम्जु दोर्जे शेर्पा र सिजीका बिजनेस प्रमुख प्रदीप पुडासैनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एक वर्षको सम्झौताको रकम कति हुने भनी दुवै पक्षले खुलाएका छैनन् । लिग शुक्रबार सुरु भएको छ । लिगमा हिमालयन शेर्पाले पहिलो खेल आज (शनिबार) सङ्कटासँग खेल्ने आयोजकले जनाएको छ ।
विर्तामोडलाई हराउँदै आयोजक फाइनलमा प्रवेश
पथरी । मोरङको कानेपोखरी—५, स्थित जहदाको रंगशालामा जारी ‘जहदा भेट्रानस गोल्डकप’ प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेलमा विर्तामोडलाई हराउँदै आयोजक जहदा फाइनलमा पुगेको छ ।बिहीबार भएको खेलमा विर्तामोड भेट्रानस एफसीलाई १–४ गोलको अन्तरले विजय हुर्दै आयोजक जहदा फाइनलमा पुगेको हो । आयोजक जहदा भेट्रानस एफसीका क्याप्टेन चरण गुरुङले खेलको १० औं मिनेटमा १ गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । जहदाका जर्सी नम्बर ९ का खेलाडी रमेश गुरुङको क्रस पासमा जर्सी नम्बर १० का चरण गुरुङले पोष्ट नजिकबाट जाली चुमाएका थिए । त्यसैगरी आयोजक जहदाका ९ नम्बरे खेलाडी रमेश गुरुङले १ गोल थप्दै टिमलाई बलियो बनाएका थिए ।खेलको ३३ औं मिनेटमा विर्ता
जहदा भेट्रानस गोल्डकपमा हाम्रो इटहरी सेमिफाइनलमा प्रवेश
पथरी/ मोरङको कानेपोखरी—५, स्थित जहदाको रंगशालामा जारी ‘जहदा भेट्रानस गोल्डकप’ प्रतियोगिताको पहिलो चरणको अन्तिम दिनको खेलमा हाम्रो इटहरी भेट्रानस एफसी विजय भएको छ ।बुधबार भएको खेलमा अभिषेक चर्च राझर नवलपरासीलाई २–३ गोलको अन्तरले विजय हुँदै हाम्रो इटहरी सेमिफाइनलमा पुगेको हो । हाम्रो इटहरीका लिलाराम मगरले खेलको पहिलो हाफ अन्तिम समय खेलको ३० औं मिनेटमा १ गोल गर्दै गोलको खाता खोलेका थिए । त्यसैगरी अभिषेक चर्च राझर नवलपरासीका सुकलाल तामाङले खेलको ३३ औं मिनेटमा १ गोल गर्दै खेललाई बराबरी बनाएका थिए । त्यसैगरी अभिषेक चर्च राझर नवलपरासीका गोल रक्षकले पोष्ट छेउमा गोल बचाउ गर्दै हानेको बल आफ्नै खेलाडीको
ए’ डिजिभन लिग फुटबललाई पुनः कतार एयरवेजले प्रायोजन गर्ने
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फाले) यस सिजनको शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको लागि कतार एयरवेजसँग प्रायोजन सम्झौता नवीकरण गरेको छ ।एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद इल इमानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार कतार एयरवेज थप एक वर्षका लागि लिगको प्रायोजन गर्ने भएको छ ।कतार एयरवेजले अघिल्लो संस्करणको लिगमासमेत मुख्य प्रायोजकको रुपमा प्रायोजन गरेको थियो । यही मङ्सिर ३ गतेदेखि आयोजना हुने ‘ए’ डिभिजन लिगमा विभिन्न १४ टोली सहभागी छन् । यसमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, एपिएफ फुटबल क्लब, मछिन्द्र फुटबल क्लब, सङ्कटा फुटबल क्लब, ने